काठमाडौँमा प्रहरी ज’वानको डे’रामा एक किलो ‘सुन’ भे’टियो ! – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठज्योतिषीकाठमाडौँमा प्रहरी ज’वानको डे’रामा एक किलो ‘सुन’ भे’टियो !
काठमाडौँमा प्रहरी ज’वानको डे’रामा एक किलो ‘सुन’ भे’टियो !
काठमाडौं। महानगरीय प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गमा कार्यरत एक प्रहरी जवानको घरमा एक किलो सुन फेला परेको छ। साउन १३ गतेमात्र दरबारमार्ग प्रहरीले १५ किलो पहेलो धातु बरामद गरेको थियो। सुरुमा सबै सुन भएको बताइए पनि प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर साढे १४ किलो चाँदी र आधा किलो सुन भएको जानकारी दिएको थियो। यो प्रकरणमा प्रहरीको सक्रियता नै शंकास्पद देखिएपछि
दरबारमार्ग प्रहरीमाथि नै अनुसन्धान भइरहेको बेला त्यहाँ कार्यरत प्रहरी जवान प्रशन्न श्रेष्ठको डेरामा सुनको एउटा ‘विस्कुट’ भेटिएको हो। १५ किलो ‘सुन’ प्रकरणको छानबिनका एक उच्च अधिकारीका अनुसार शुक्रबार प्रहरी जवान श्रेष्ठको घरमा पहेलो धातु भेटिएको हो । पनि त्यो सुन हो वा होइन भन्ने एकिन भने हुन बाँकी नै छ। श्रेष्ठका डेरामा भेटिएको धातु १५ किलोमध्येकै हो वा अन्य हो भन्ने विषयमासमेत अनुसन्धान भइरहेको ति अधिकारीको भनाइ छ।
१५ किलो ‘सुन’ प्रकरण शंकास्पद देखिएपछि बिहीबार महानगरीय प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गका प्रमुख डीएसपी रञ्जन दाहाललाई सरुवा गरिएको थियो। उनलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान पठाइएको हो। प्रहरी अपरेशनमा समन्वय नगरेको र दाहालको कार्यशैलीमाथि नै छानबिन भइरहेकाले प्रमाण लोप गर्न सक्ने आशंकामा सरुवा गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।। दाहाललाई प्रहरी प्रतिष्ठानमा ताने लगत्तै त्यहाँका डीएसपी रामेश्वर पौडेललाई दरबारमार्गको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। शुक्रबार त्यहाँ कार्यरत प्रहरी जवानको डेरामासमेत पहेलो धातु देखिएपछि प्रहरीकै मिलेमतो रहेको आशंका बढेको छ।
शुक्रबार पक्राउ परेका जवानलाई दरबारमार्गकै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीको भनाइ छ । मंगलबार मात्र प्रहरीले कमलादीबाट एउटा झोलामा १५ किलो पहेँलो धातु बरामद गरेको थियो। एउटा झोलामा बरामद धातु मध्ये आधा किलो सुन र बाँकी चाँदी भएको दाबी प्रहरीले गरेको छ। सुन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थल नक्कली बनाएको खुलेपछि घटना शंकास्पद बनेको हो। काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले सुन प्रकरणमा मुछिएको भनिएको गाडी बिहीबार ललितपुरको नखिपोटबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। यस प्रकरणमा अहिलेसम्म चारजना पक्राउ परेका छन्। अन्नपुर्णपोस्टबाट